တိုက်ပွဲ Royale - Androidsis | Androidsis
Supercell, ဖင်လန်နိုင်ငံမှစတူဒီယိုတစ်ခုသည် Clash Royale ၏နောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ Android သုံးစွဲသူများအကြားမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Play Store တွင် download လုပ်ခြင်းသည်သန်းနှင့်ချီ။ ရှိပြီးမဟာဗျူဟာဂိမ်းအမျိုးအစားတွင်ရည်ညွှန်းသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင် Clash Royale ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ဤအမျိုးအစားတွင် Supercell ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဂိမ်းနှင့်၎င်း၏မွမ်းမံမှုများသို့မဟုတ်၎င်းတွင်တိုးရန်အတွက်လှည့်ကွက်သတင်းများ။ သင်သိချင်တာမှန်သမျှဒီမှာရှာနိုင်တယ်။
Project Cars သည် GAMEVIL ၏ပြိုင်ကားဂိမ်းကိုယခု beta တွင်ရနိုင်သည်
GAMEVIL သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သော Project Cars သို့မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်၊
Tencent ဂိမ်းများမှ Call of Duty Mobile ကိုကြိုးစားပြီးမကြာမီတွင်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းထဲတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
Munchkin.io သည် io-type တိုက်ပွဲတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားကစားသမားများကိုအမှန်တကယ်အချိန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ A ...
Badland Brawl သည်ပထမဆုံး Badland နှင့် Badland2ကိုဖန်တီးသူများ၏ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သည်။
အိုမီဂါစစ်ပွဲများ - Galaxy ၏ချန်ပီယံများသည် Clash မှပေးသောလှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်မှအလွန်ရှင်းလင်းစွာသောက်သုံးသည်။
Notorious 99 သည် Android တွင် Battle Royale အဖြစ်လာသည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
Battlelands Royale သည် ပို၍ ခက်ခဲသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန် Battle Royale အမျိုးအစားအလောင်းအစားဖြစ်သည်။
por အက်ဒါဖာရီနို လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
Clash Royale သည် Android သုံးစွဲသူများအကြားတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာလူကြိုက်များအများကြီးပေးထားခဲ့သည် ...
Supercell ကိုဒေသတွင်းတွင်စတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့တွင် APK သည်ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့။ ...
Pokémon GO တွင်နှစ်ရက်ကျန်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်နွေရာသီ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မေ့လျော့ခဲ့သည် ...